ဒီစာလေးကတော့ ဒီနေ့မနက်ဂျာနယ်တိုက်ကနေမေးလ်ပို့လိုက်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စာတမ်းကို သူတို့ ဂျာနယ်မှာဖော်ပြထုတ်ဝေဖို့တရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာအကြောင်းကြားတဲ့စာလေးပါ။ တတိယမြောက်ထုတ်ဝေခွင့်ရတဲ့စာတမ်းပါ။ ဘွဲ့လွန်စာတမ်းပြုစုဖူးသူတိုင်း ဒီလိုစာလေးရလိုက်တဲ့အခါခံစားရတဲ့ဝမ်းသာပီတိကို ခံစားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သုတေသနသမားတိုင်းအတွက် ဒီအဆင့်ဟာနောက်ဆုံးနဲ့ အရေးကြီးဆုံးအဆင့်တစ်ခုပါဘဲ။ ကိုယ်လုပ်လိုက်လို့ရလာတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကို ကမ္ဘာပေါ်က သုတေသနသမားတိုင်းသိရှိဖို့ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုနိုင်စေဖို့ မလုပ်မဖြစ်လုပ်ရတာကတော့ သုတေသနစာတမ်းရေးသားပြီး၊ ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်းအသိအမှတ်ပြုတဲ့ဂျာနယ်တစ်ခုခုမှာ ဖော်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကိုကိုယ်ကအရင်တွေ့ရှိပြီး စာတမ်းအနေနဲ့မတင်ပြနိုင်ဘဲ၊ တခြားသူတစ်ဦးက အရင်တင်သွားရင်၊ ဒီလူကဘဲ သုတေသနနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမလူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အရေးမပါတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သုတေသနတစ်ခုပြီးတိုင်း စာတမ်းပြုစုပြီး အမြန်ထုတ်ဝေခွင့်ရအောင်ကြိုးစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
စာတမ်းရေးပြီး ဂျာနယ်တိုက်ပို့လိုက်ရုံနဲ့ ဂျာနယ်တိုက်ကလက်ခံပြီး ထုတ်ဝေပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပထမအဆင့်က သက်ဆိုင်ရာသုတေသနနယ်ပယ်မှာ အတွေ့အကြုံများတဲ့ စီနီယာသုတေသနသမားတွေဆီကနေ စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးသပ်ဝေဖန်ပြီး အကဲဖြတ်ချက်ခံယူရတာဖြစ်ပါတယ်။ referee လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဂျာနယ်ပေါ်မူတည်ပြီး referee ၂ယောက်ကနေ၃ယောက်အထိရှိပါတယ်။ ဂျာနယ်အယ်ဒီတာက ပထမဆုံး ကိုယ်တင်တဲ့စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အတွေ့အကြုံများတယ်လို့ယူဆတဲ့ ပါမောက္ခ၊ သုတေသနသမား စတာတွေကို အီးမေးလ်လိပ်စာကတဆင့်ဆက်သွယ်ပြီး၊ တင်လိုက်တဲ့စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အကဲဖြတ်ပေးနိုင်မလားဆိုတာ လှမ်းမေးပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်က လက်ခံလိုက်ရင် သူက ဒီစာတမ်းကို ထုတ်ဝေခွင့်ပြုမပြုဆုံးဖြတ်ပေးမယ့် referee ဖြစ်သွားပါတယ်။ နောက်နှစ်ပတ်သို့မဟုတ် ၂လ အတွင်းမှာ ဒီrefereeတွေဆီကနေ စာတမ်းကို ထုတ်ဝေဖို့လက်ခံမလား (accept)၊ ပြင်ဆင်ချက်လုပ်ဖို့ခိုင်းမလား (major/minor revision)၊ ထုတ်ဝေဖို့ငြင်းဆန်မလား(reject) ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေထဲကတမျိုးမျိုးက အယ်ဒီတာဆီရောက်ပြီး အယ်ဒီတာကတဆင့် စာတမ်းရှင်ကို ပြန်ပို့ပါတယ်။ revision ဆိုရင်refereeက စာသားပြင်ခိုင်းတာမျိုး၊ စာရင်းဆိုင်ရာတွက်ချက်မှုပြန်လုပ်ခိုင်းတာမျိုး၊ အနည်းဆုံးခိုင်းတတ်ပြီး၊ သိပ်ဆိုးရင် သုတေသနကို ထပ်လုပ်ခိုင်းတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်။ accept ရမရဆိုတာ၊ ကိုယ့်စာတမ်းရဲ့အရည်အသွေးပေါ်မူတည်သလို၊ ကံပေါ်မှာလည်းတည်ပါသေးတယ်။ သိပ်တင်းကျပ်တဲ့ referee မျိုးနဲ့ကျရင် major/minor revision ဒါမှမဟုတ် reject ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေထဲက တချို့ reject ထိကြတယ်။ တခြားဂျာနယ်ကိုပြောင်းတင်ကြရတော့မယ်။ အချိန်ထပ်ကြာကြဦးမှာပေါ့။
ဒါကြောင့်စာတမ်းတွေမတင်ခင်မှာ ပထမဆုံးအရေးကြီးတာက စာတမ်းမှာလိုအပ်တဲ့ နိဒါန်း၊ သုတေသနရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ပုံလုပ်နည်း၊ အဖြေတွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်ဆွေးနွေးချက်နဲ့နိဂုံး၊ summary လို့ခေါ်တဲ့ စာတမ်းတစ်ခုလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်တို့ကို အစီအစဉ်တကျရေးဖို့နဲ့ပြည့်စုံဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ရတဲ့အဖြေနဲ့ အဲဒီအပေါ်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်က အပိုအလိုမရှိဖြစ်ရပါတယ်။ ကိုက်ညီနေရပါတယ်။ ကိုယ်တွေ့တာထက်ပိုပြီး မပြောရပါဘူး။ စကားလုံးအသုံးအနှုံးက အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ may/ would စတဲ့အသေးစိတ်အသုံးအနှုံးလေးတွေကအစ စကားလုံးတွေရဲ့ လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုသေချာသဘောပေါက်ပြီးသုံးရပါတယ်။ နိဂုံးမှာ လိုတာထက်ပိုပြီးရေးရင် refereeအများစုကမကြိုက်ပါဘူး။ နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုက grammer check နဲ့ spelling checkအထပ်ထပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားတစ်ခုခုဖတ်လိုက်ရတာနဲ့ refereeစိတ်ထဲမှာ အနည်းဆုံးတော့ impression down သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဂျာနယ်တချို့မှာ refereeအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ခံရပြီး၊ စာတမ်းတချို့ကိုသုံးသပ်နေတာမို့၊ spelling/grammer အမှားတစ်ခုတွေ့လိုက်တာနဲ့ ခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံရပါတယ်။ ဂျပန်တွေကတော့ စာတမ်းအားလုံးပြီးသွားရင် Native American တွေနဲ့ grammer check, word check လုပ်ပါတယ်။ အများစုက အင်္ဂလိပ်အားနည်းတာကြောင့် ပါမောက္ခတွေကအစ ကုမ္ပဏီတွေပို့ အကုန်အကျခံပြီး အင်္ဂလိပ်စာစစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ကြရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအတွက်တော့၊ မြန်မာပြည်မှာ သင်လာရတာတွေက ဒီလိုအစစ်ခံရလောက်အောင်၊ မညံ့ပါဘူး။ ကျွန်တော့်စာတမ်း၃စောင်လုံးတစ်ခါမှ Native တွေနဲ့ မစစ်ဖူးပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာယုံကြည်ချက်ရှိတာရယ်၊ ပါမောက္ခကလည်းဖတ်ကြည့်ပြီး အမြဲချီးကျူးတတ်ပြီး၊ မင်းတို့မြန်မာတွေအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပြီး အင်္ဂလိပ်စာစစ်စရာမလိုဘူးလို့အမြဲပြောပါတယ်။
referee တွေဆီကနေ ပြန်စာရလို့ တခါတည်းနဲ့ accept မဟုတ်ဘဲ ပြင်ဆင်ချက်လုပ်ဖို့ခိုင်းလာခဲ့ရင် ၊ ပြောတဲ့အတိုင်းတတ်နိုင်သလောက်ပြင်ဆင်ပေးရပါတယ်။ မပြင်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်း၊ ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုပြောပြပြီး မပြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောရပါတယ်။ ၂လအတွင်း ပြင်ဆင်ချက်ကိုပြန်ပို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ပြန်စာမှာ ဘယ်အချက်ကိုဘယ်လိုပြင်ပြီးကြောင်း အသေးစိတ်ရေးပြပေးရပါတယ်။ referee က ကျေနပ်မှ ကိုယ့်စာတမ်းကို ထုတ်ဝေခွင့်ရမှာမို့ပါ။
ဒါကြောင့်သုတေသနသမားတွေ၊ ဘွဲ့လွန်တက်နေသူတွေအတွက် သုတေသနလုပ်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူး။ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ စာတမ်းထုတ်ဝေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်တွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွက်ချက်မှု (statistic software) နဲ့ ဂရပ်ပုံ ရေးဆွဲမှု၊ ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်မှု softwareတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းကျင်နေဖို့လိုပါတယ်။ စာတမ်းတစ်စောင်ထုတ်ဝေခွင့်ရဖို့ အနည်းဆုံး ၃လကနေ တနှစ်အထိကြာတတ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်ကျော်ကြာအောင် referee ဆီ ပြင်ဆင်ချက်ပို့လိုက်၊ refereeကမကြိုက်သေးလို့ ပြန်ခိုင်းလိုက်နဲ့ဖြစ်တာကိုလည်းကြားဖူးပါတယ်။ PhD ဘွဲ့သမားတွေအတွက် စာတမ်းထုတ်ဝေချက်ရမှ ဘွဲ့ပေးတဲ့အတွက် နောက်ဆုံးနှစ်အရောက်မှာ စာတမ်းတစ်စောင်လောက်မှ ထုတ်ဝေခွင့်မရသေးရင် ၄နှစ်ပြည့်ချိန်မှာ ဘွဲ့ရဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စာတမ်းရေးပြီးချိန်ကနေ ထုတ်ဝေခွင့်ရချိန်အထိ ၁နှစ်ကြာမယ်လို့မှန်းပြီး အချိန်တွက်ပြီး စာတမ်းပြုစုသင့်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကတော့ ဘွဲ့လွန်စာတမ်းပြုစုနေတဲ့သူတွေ မကြာခင်ပြုစုမယ့်သူတွေအတွက် အထောက်အကူရလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။
Posted by Dr. Nyan at 9:42 AM
ကျွန်မအတွက် ဗဟုသုတအများကြီး ရသွားပါတယ် ဆရာ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
I amapost-grad Master Student from engineering Field. For my graduation, I have to prepare Thesis only. I would like to request your suggestion for writing Thesis. I mean, which section I should start to write.e.g Literature Review, Experimental, Results and Discusstion.
Dear Ma Mar Mar,
Writingathesis is much more difficult thanapaper. It takes time to completely finishaperfect thesis. When I wasamaster student in Myanmar, one of my professors who did his master in UK suggested students to begin writing from the beginning of the research. He pointed out that if someone try to write thesis only after all experiment, it will be very late. He encouraged us to think of thesis writing at every moment we have time to do so. Once some idea appears in mind, write down it in the note at that moment. Otherwise, it will be totally forgotten.
At the beginning, we know what we want to find out, why it is necessary to find out, and how we are going to do it. So I began writing down the background or the reason why I do that particular research. I used to create5different word files; Introduction (for background, objective of research), Literature review (about what have been done in related topics), Materials and methods (experimental), Results, Discussion and References files. Little by little, day by day, I wrote some sentences when I read an article related to the problem that I was trying to solve in literature review. While doing experiment, I wrote materials and methods. When some results were obtained, I began to think of discussion; how to interpret these results, how to relate with my objective, what is still needed...etc). When all results were achieved, I wrote the results completely and began discussion.
As the literature review is the longest part and has to be as complete as possible, I tried to read almost every day at least one article and add more and more while doing experiment. When I found interesting finding I marked the sentences and the article for reference. Later, when I collected the information such as the title, authors and journal name for reference, it was easy to find.
I really thank for your explanation and sharing of your experience. It is very worth for me who have less experience. I can plan and prepare for my writing according your explanation.It is too late for me to start writing from the beginning of research as I have spent already 22 months for Coursework study and experiments. Now, I have finished my experiments and am preparaing Thesis.